Roobab mahiigaan ah oo Itoobiya dad ku dilay - BBC News Somali
Roobab mahiigaan ah oo Itoobiya dad ku dilay
Image caption Daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay Tanzania
Wararka ka imanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan 50 qof ay dhinteen kaddib markii qeyba ka mid ah dalka ay ka da’een roobab xooggan oo sababay daadad iyo dhul go’.
Masuuliyiinta degmada Wolaita ee koofurta dalka Itoobiya ayaa waxay u sheegeen idaacadda ay wada shaqeynta leeyihiin, in 41 qof ay ku dhinteen Isniintii degaanka kaddib markii ay ku soo fataheen daadad xoog leh oo wata dhoobo, waxaana sababay roobab mahiigaan ah oo dhowr maalmood ka da'ayey gobolka.
9 qof oo kale waxay ku dhinteen meelo ka mid ah degaanka Bole ee koofur-bari Itoobiya, halkaasi oo ay daadadku qaadeen boqolaal neef.
Saraakiishu waxay sheegeen in kumannaan qof ay ku guryo beeleen daadadkaas xooga leh oo sii cusleeyey sidii wax loola gaari lahaa dadka gacan-siinta u baahan, waayo waxaa wada burburay inta badan wadooyinkii iyo kaabadihii.
Dawladda Itoobiya iyo hay’adaha gargaarku waxay codsadeen lacag dhan 4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagu kaalmeeyo malaayiin qof oo deg deg ugu baahan raashin.
Abaarta ayaa waxaa uga sii daray cimilada El Nino ee saamaysay bariga iyo Koonfurta Afrika.
Dalkan ku yaalla Bariga Afrika ayaa waxa uu wajahayaa mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee halkaasi ka dhaca muddo 50 sana ah, iyadoo in ka badan 10 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini’aadamnimo.